QM oo soo Dhaweysay Guusha Puntland ay Gaartay Al-shabaab – Radio Daljir
QM oo soo Dhaweysay Guusha Puntland ay Gaartay Al-shabaab
Maarso 22, 2016 2:09 b 0
Suuj, March, 22, 2016-(Daljir)_Qoraal uu soo saaray ergayga gaarka ah ee Qaramada midoobay u qaabilsan arimaha Soomaaliya Michael Keating Ayaa lagu cambaareeyey dulaankii ay kooxda Al-shabaab ku qaaday degaanada nabdoon ee Puntland gaar’ahaan Gobalada Mudug iyo Nugaal.
Danjire Michael Keating ayaa dhinaca kale Dawlada Puntland iyo Ciidamadeeda ku bogaadiyey gacantii adkayd ee ay ku qabteen kooxdii soo duushay, wuxuu sheegay inay Ciidamada Puntland kaga adkaadeen maleeshiyaadkan tuulada Garacad iyo Toga suuj oo ay maalmihii u danbeeyey kula dagaalamayeen koox katirsan Alshabaab.
Michael Keating Ayaa Dawlada Soomaaliya ku bogaadiyey inay taageero sanad ciidan ah u fidisay Dawlada Puntland oo dagaal kula jirtey koox argagixiso ah.
Dadka reer Puntland ayaa hadalka Keating u arka mid xiligeedii kasoo daahay, maadama ay Beesha Caalamku ka aamusnayd dagaalka ay Puntland kula jirto kooxaha kusoo duulay 14-kii Bishan, aysana wax gacana kusiin dagaalkaas, marka laga reebo Dawlada Emaraatka oo taageero kooban soo gaarsiisay Puntland.
Wado Hadalo u Dhaxeeya Maraykanka iyo Cuba oo wali ka socda Havana
Dhageyso Shacabka Puntland oo soo dhaweeyey Guullaha ay gaareen ciidamada Difaaca